Lazain’ireo mpanorina tanàna hoe maty ny vatohara ao amin’ny Helodrano Indiàna any St. Vincent. Mifanohitra amin’izay no asehon’ireto sary ireto · Global Voices teny Malagasy
'Satria ve tsy hitanao, noho izany tsy misy ny zavatra iray'
Voadika ny 15 Jolay 2021 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Italiano, Español, українська, 日本語, English
Trondro ao amin'ny faritry ny bozaka anaty ranomasin'ny Helodrano Indiàna, ao St. Vincent. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana.
Iray amin'ireo fotoana mamy nandritra ny fahazazàn'ilay mpakasary Nadia Huggins ny filomanosana tao amin'ny Helodrano Indiàna, torapasika tery ao amin'ny morontsiraka atsimo, tsara petraka ao akaikin'i Kingston, renivojitr'i St. Vincent, misy rano mangatsakatsaka miloko manga-maitso arovan'ireo haran-dranomasina eny lavitra eny. Tamin'ny alàlan'ny traikefany amin'ny fakàna sary nandritra ireo taona enina farany teo raha kely indrindra, notohizany ny fanomezana voninahitra ilay faritra, amin'ny fandraketana “hatramin'ny bitika indrindra”ny momba ilay torapasika sy ny harambatony manodidina azy. Asehon'ireo saripikany ny fanajàna lalina sy firaiketampo akaiky amin'ilay ranomasimbe, ary ny fiantraikany amin'ireo mponina ao amin'ilay nosy sy ny fomba fahitan-dry zareo ny tenany.
Araka ny fanazavàny ao anatin'ny iray amin'ireo fanambaràny , “Ny traikefam-piainan'ny ankamaroan'ny olona miaraka amin'ny ranomasina dia hita eo amin'ny fanambonin'ny ranomasina sy ny faratazana, ary adinon'izy ireo tanteraka izay mitranga ao ambany ao. Izaho dia liana amin'ny fiheverana hoe ‘tsy hoe satria tsy hitanao dia noho izany tsy misy ny zavatra iray ‘.” Fomba fijery iray toa manohina fo izy io amin'izao fotoana izao, satria misy tolokevitra miandry fankatoavana hanaovana fikaohana goavana ny ampahany amin'ireo vatohara— manodidina ny 17,500 square feet (1.626 metatra toradroa) mivelatra avy amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny 150 feet (45,72 metatra) mivoaka mankany an-dranomasina—ka hanoloana azy amina sarintsarina haran-dranomasina voatrolombelona (=tsy voajanahary) sy fasika nafarana, na eo aza ny zavamisy hoe anisan'ny ampahany ao amin'ilay nosy natolotra ho Faritra Amorondranomasina Atsimo Arovana ilay faritra.
Lazain'i Huggins fa asehon'ireo rakitra fanarahamaso fa maro, salama ary tena zavadehibe ho an'ny fisian'ny jono maharitra ao an-toerana ireo haran-dranomasina ao amin'ity faritra ity. Resy lahatra izy fa “misy tombony ny fitahirizana […] ny fiainana ao amin'io faritra io” ary “TENA azo atao ny famelomana indray ny ao amin'ny Helodrano Indiàna.” Ao anatin'ireo andiana lahatsoratra voalohany nalefany ao amin'ny Facebook hisarihana ny saina ho amin'ilay toedraharaha, nanazava izy:
Rehefa tsy itsabahan'ny olombelona, izaho vavolombelon'ny fitsiriana indray teo amin'ireo vatohara elkhorn (vatohara miendrika tandroka diera) tany amin'ireo faritra manandanja ao amin'ilay helodrano. Alaivo sary ao an-tsaina ny mety ho azo atao raha toa isika tena mametraka tokoa ny ezaka araham-piniavana ataontsika na tsia, tsy vahaolana ny haran-dranomasina voatrolombelona.
Tena mila fandrosoana sy mahita ny fireneko miroborobo aho, saingy tena manify dia manify ny efitra manasaraka ny fandrosoana sy ny fiarovana. Masina ny zavatra sasany ary tena ilaina arovana ho an'ny taranaka handimby manaraka. Manana fahafahana ny hiverina indray ny haran-dranomasina. Na ny haran-dranomasina efa maty aza dia mitàna anjara asa lehibe ao anatin'ny rohivoahary (ecosystem).
Ho entiny manaporofo ny fomba fijeriny, tamin'ny 4 Jolay teo dia nandeha niverina tanaty rano i Huggins sy namana mpiara-miasa aminy iray mba haka saripika vaovao sy akaiky kokoa ny zavamisy ankehitriny ka hampiseho fa mbola miaina ireo haran-dranomasina:
Ny tombana ara-tontolo iainana nataon'ireo mpanorina tanàna, dia nanambara fa maty ny haran-dranomasina ao amin'ny Helodrano Indiàna. Na iray aza, tsy misy sary tanaty ranomasina manamarina io filazàna io. Tifitra sary natao teny amin'ny fasika no betsaka. Tsy misy hafa amin'ny fomba fanaon'ny ankamaroan'ny olona hijereny ny zavatra rehetra eto, tsy miditra lalina mandalina ny olana hatrany ifotony mba hahafantarana izay tena zavatra mitranga, fa amin'ny fijerena ny ivelany ety ambony fotsiny […] topazo maso ireo saripika ireo ary lazao ahy raha miendrika haran-dranomasina maty izany.
Bozaka anaty ranomasina tena akaikin'ny morontsiraka; toeram-ponenana lafatra ho an'ireo soka-dranomasina. Sary an'i Nadia Huggins, 4 Jolay 2021, nahazoana alàlana
Haran-dranomasina elkhorn vao eo am-piforonana, sary nopihana tamin'ny 4 Jolay 2021, tamin'ny halalina 3 m miala ambanin'ny ranomasina ary amin'ny fangitra 13°08’12.8”N sy 61°12'32.0″W. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Haran-dranomasina miendrika atidoha, 4 Jolay 2021. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Zavamananaina an-dranomasina mivoaka avy ao anatin'ilay vatohara miendrika atidoha, 4 Jolay 2021. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Rakotra zoantid, 4 Jolay 2021. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Andiana sokindriaka fotsy, 4 Jolay 2021. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Vatohara feno sarin-kintana, 4 Jolay 2021. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Tamin'ny fanipihana ny hoe “mety hitovy amin'ny vato volontany efa maty ny vatohara, satria tsy afaka mahita afa-tsy sokajin-doko voafetra ny mason'olombelona rehefa ao anaty rano”, dia nandefa saripika tsy nokiraina, ary avy eo nasiana ‘filtre’ i Huggins mba ho entina manaingo bebe kokoa “ireo karazana loko tena misy marina.” Nanoro hevitra ireo mpaneho hevitra tamin'ilay lahatsorany ihany koa izy hoe azon-dry zareo atao ny mitsidika ny Ministeran'ny Drafitra sy ny Fampandrosoana ao amin'ny firenena ka mangataka hijery ireo antontan-kevitra avy amin'ilay mpanorina ny “La Vue Hotel” sy ny “Beach Club“.
Mandritra izany fotoana izany, ilay mpampiasa Facebook, Karen Palmer, nilaza fa “tsy azo ekena” ny hoe “ilay ‘tombana’ natolotra niaraka tamin'ny fangatahan’ [ilay mpanorina] [dia] olona iray Injeniera momba ny Tontolo Iainana ihany no nanao azy, fa tsy misy na iray aza fandraisana anjaran'ireo hafa manampahaizana manokana, toy ny Biôlôjista Mpahay ny Anaty Ranomasina”:
Tsy hita ao anatiny ny angondrakitra ho entina manohana ireo fehinkevitra milaza fa maty ny vatohara, tsy hita ao ny drafitra tsara petraka sy taridalana momba izay fomba hanatanterahana ny asa, tsy voamarika ao ny fomba hitazonana ireo mpandraharaha ho tomponandraikitra amin'izay fanatanterahana asa araka ny tokony ho izy, sy ho tomponandraikitra amin'izay asa aroso rehetra, ary tsy misy fandalinana voarakitra ao momba izay fiantraika ratsin'ny fanesorana ireo haran-dranomasina. Ireo rehetra ireo dia mbola ampian'ny fanaovana be marenina sy tsy fandraisana andraikitra ho an'ireo olona manoso-kevitra ny hanesorana ireo haran-dranomasina velona amin'izao vaninandro iainantsika izao, tsy resahantsika ny ampahany amin'ilay haran-dranomasina izay tafiditra ao anatin'ilay vala an-dranomasina vinavinaina hatao.
Mr. Adem Adem avy amin'ny A&A Capital Inc, izay manana fahalinana be amin'ny resaka fampandrosoana, dia nilaza—raha miteny momba ireo saripika an'i Huggins—fa “tsy any amin'ny faritra hametrahanay ilay haran-dranomasina voatrolombelona ireo saripika hitanareo ireo; tena lavitry ny toerana eritreretinay hanaovana ny asa fanadiovana.” Tonga hatramin'ny fitenenany hoe “tsy hisy velively ato anatin'ny iray tapitrisa taona ka hoe mpampiasa vola amin'io tetikasa io no hieritreritra na hanao drafitra hanafoana ireo haran-dranomasina velona; Manasa ny rehetra aho ho tonga sy hijery fa vatohara maty no eny akaikin'ny morontsiraka”. Nanao fanamby koa izy momba ny fiampangàn'i Palmer hoe tsy naka ny hevitr'ireo biôlôjista mpahay ny anaty ranomasina ilay vondrona:
Nanakarama biôlôjista mpahay ny anaty ranomasina izahay ho tonga sy hijery ilay faritra; naka sary marobe ry zareo, tamin'ny fotoana samihafa rehefa hita ireo haran-dranomasina, ary tsy haran-dranomasina velona izy ireny.
Ho setriny, nalefan'i Huggins ny saripika iray ahitàna eo ankilany ny “metadata” momba ny elanelana navoakan'ny fakantsariny, hanoherana izany:
Mba ho tena hita mazava tsaran'ny ‘focus’ ny any ambadika (izay lazaina amin'ny hoe fampiasana ny ‘faible profondeur de champ’ – fanamarihan'ny mpandika lahatsoratra: io dia teknika fampiasan'ireo mahafehy ny fakàna sary) dia mila tena akaikin'ny morona ianao, araka izay afaka hitanareo avy eo ampototry ny hazo voanio sy ny ampahany bitika amin'ilay tranobe.
Ny fangitra GPS misy io haran-dranomasina io dia manodidina ny 13.136802, -61.208856. Mampiseho haran-dranomasina elkhorn iray eo am-pitomboana manakaiky ilay faritra naroso hanaovana fikaohana.
Azafady, aza izaho no mba fitahana (aza anaovana mamaguy aho).
“Mamaguy” dia fomba fiteny ao Karaiba entina manamabara ny hoe mandiso fanantenana amin'ny fampiasana fitaka.
Anaty lahatsaratra hafa ao amin'ny Facebook, nozarain'i Huggins ireo saripika marobe ahitàna andiana haran-dranomasina elkhorn tena tandindonim-paharinganana, izany rehetra izany dia tafiditra ao anatin'ilay faritra hanaovana fikaohana daholo, narahany fanamarihana fa ireo karazany ireo dia “mitàna toerana manandanja manao asan'ny mpamaky onja, indrindra fa mandritra ny vanimpotoanan'ny rivomahery—izay tena efa ao anatiny mihitsy isika izao.”
Vatohara Elkhorn ao amin'ny Helodrano Indiàna. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Teo aloha i St. Vincent dia iray tamin'ireo faritany ao Karaiba niharam-pahavoazana tamin'ny fandalovan'i Elsa tsy ela akory izay, ilay voalohany amin'ny tafiotra mahery mandritra ny vanimpotoana 2021-‘ny rivodoza ao Atlantika.
Andiana Elkhorn ao amin'ny Helodrano Indiàna. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Raha miady mafy ireo mpampiasa media sôsialy ao an-toerana sy any amin'ny faritra ny mba hitahirizana ireo haran-dranomasina voajanahary misy ao—eny fa hatramin'ny fanombohana fanangonatsonia iray ety anaty tambajotra, izay efa nahazo sahady sonia 2.000 tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra—dia mitohy hatrany vao mainka henika fiainana kosa ao amin'ny fanambanin'ny Helodrano Indiàna:
Meduses (medoza) eo ampikisahana, tao amin'ny Helodrano Indiàna. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Trondro milalao miaraka amina “Sand dollar” ao amin'ny Helodrano Indiàna. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Fozabe hisakafo sokindriaka ao amin'ny Helodrano Indiàna. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Feno aina mofanaretsaka ao amin'ny Vatoharan'ny Helodrano Indiàna. Sary an'i Nadia Huggins, nahazoana alàlana
Afaka mijery misimisy kokoa amin'ireo saripikan'i Nadia momba ny Helodrano Indiàna ianareo eto, eto ary eto.